”Rooble 2007-dii ayaa laga saaray diiwaanka Sweden” – Maxay saxaafadda Sweden ka qortay RW magacaaban? | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Rooble 2007-dii ayaa laga saaray diiwaanka Sweden” – Maxay saxaafadda Sweden ka...
”Rooble 2007-dii ayaa laga saaray diiwaanka Sweden” – Maxay saxaafadda Sweden ka qortay RW magacaaban?
(Stockholm) 19 Sebt 2020 – Tan iyo markii la ridey Xassan Cali Khayrre xagaagii, Somalia ma lahayn xukuumad rasmi ah, balse waxaa haatan xilkaa loo magacaabay ninka Swedish-Soomaaliga ah ee Maxamed Xuseen Rooble oo sugaya ansixinta Baarlamanka.
Arrinta ugu xasaasisani waa Doorashada Guud oo qorshaysan bisha Febraayo, balse uu Madaxwaynuhu doonayo in dib loo dhigo, ayuu qoraalkiisa ku bilaabay Dagens Nyheter.
Rooble ayaa Sweden soo galay horraantii 1992-kii, kaddib bilowgii dagaalkii sokeeye ee Somalia. 5 sanadood kaddib wuxuu qaatay dhalashada Swedish-ka. Wuxuu waxbarasho gaarsiisan master ka qaatay tiknolojiyadda bay’ada oo uu 2000 ka qaatay Royal Institute of Technology, Sweden.
Wuxuu deeto degey dhowr cinwaan oo ku yaalla galbeedka Stockholm ilaa ay markii dambe wacaalkiisa waysey hay’adda canshuurta Sweden (Skattverket) 2004-tii, kaasoo laga diiwaanka laga wada saaray 2007-dii, iyadoo loo cuskaday in aan ”war laga haynin.”
Wuxuu deeto kasoo muuqday Jaamacadda University of Birmingham ee England, isagoo markii dambe ku biiray hay’ad QM la shaqeeysa oo dhanka waxbarashada ah oo la yiraahdo ITCILO oo saldhigata Torino.
Waxaa hadda Rooble hor taalla inuu la xaalo baahida dadka, qabiillada, kooxaha argagixisada ah iyo kooxaha baarlamanka dhinac marsan oo muddo dheer ahaa kuwa isku haya awoodda dalka oo ah mid ay la degeen abaaro iyo musuq, ayuu qoray Dagens Nyheter.
Somalia waa dal ku tiirsan kaalmo dibadeed oo ay Sweden ka mid tahay dalalka aadka u caawiya iyadoo sanadkii ku bixisa SEK 600 milyan oo karoon.
DN waa isku dayday inay hesho Maxamed Xuseen Rooble, mase dhicin.
FG: Waxa laga saaray waa diiwaanka hay’adda canshuuraha Sweden oo sidoo kale qaabilsan dad-dhigista Sweden maadaama aanu dalka deganayn, balse taasi kama dhigna in laga qaaday dhalashada Swedish-ka.
Kungliga tekniska högskolan ee Stockholm
Previous articleXaftar oo xayiraaddii ka qaaday ceelasha shidaalka Libya (Danta uu ka leeyahay?)
Next article”Khilaaf noo kharash badan!” – Kooxaha ololeeya ee Washington oo ka xoolaystay xasaradda Khaliijka (Imisa ayay markiiba ka qaataan Imaaraadka & Qadar?)